Gọọmenti Anambra Ga-Eme Ka Amụma N20m Mmepe Ime Obodo Baa N'Usoro Ọchịchị
Previous Article Gọọmenti Steeti Anambra Ekwupụtago Njikere Ya Ịkwalite Ọdịmma Ndi Ntorobịa
Next Article Anyị Agaghị Ekwe Ka E Gwuo Ojoro Ọbụla na Nhọpụta Anambra --- Ndị Ahịa
Gọọmenti steeti Anambra ga-emezị amụma inye nde Naịra iri abụọ (N20m) nyegara ime ime obodo dị iche iche dị na steeti ahụ iji wee họrọ rụọ ihe masịrị ha, bụ nke steeti ahụ na-eme, ka ọ bụrụzie ihe a na-eme kwa oge, ma bụrụkwa nke ga-enwe nkwado n'usoro iwu, site n'ịwepụta atụmata iwu ga-akwado ya n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ.
Aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ kwuputara nke ahụ n'ofufe nru pụrụ iche, nke weere ọnọdụ ụbọchị ụka gara aga n'ụlọ ụka St. Andrews (Katọlik) nke Adazi Nnukwu, dị n'okpuru ọchịchị Anaọcha.
Ya bụ ofufe nru pụrụ iche bụ iji mee mmemme icheta ọgbụgba ahọ iri abụọ na ise e jiri chie onye 'Auxiliary Bishop' nke ụka Katọlik na Dịọsis Awka bụ 'Most Reverend' Jonas-Benson Okoye.
Gọvanọ Willie Obianọ, nke onye nọchitere anya ya bụ ode akwụkwọ izugbe nke steeti ahụ, bụ Ọkammụta Sobe Chukwulobelụ mere ka a mara banyere izuzu iwebata ya bụ amụma n'usoro ọchịchị, ma kpọkuokwa ndị steeti ahụ ka ha gaa n'ihu ịdọnyere ọchịchị ya ukwu.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere onye kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịaa, ọrụ aka na nkwalite egwuregwu, bụ Dọkịnta oriakụ Uju Nwọgụ; onye isi otu na-ahụ maka ịhọpụtagharị Gọvanọ Willie Obianọ ma bụrụkwa onye isi izugbe nke otu pati APGA n'ala anyị n'ogo gara aga, bụ maazị Victor Umeh, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ. Ha niile kelere Chineke banyere ndụ ya bụ nwoke.
Ha jizịkwara ohere ahụ wee kpọkuo ndị Anambra ka ha nuputa n'igwè sonyesiekwa ike na nhọpụta a ga-eme na steeti ahụ n'abalị iri na asatọ nke ọnwa Nọvemba ahọ a.
N'okwu nke ya, onye bụ isi a hụrụ kwaba okpu na ya bụ mmemme, bụ Most Reverend' Jonas-Benson Okoye kelere gọọmenti steeti Anambra n'ihi ihe o megoro, ọ kachasị na ngalaba ahụ ike, ma dụzie gọọmenti etiti ka o were ngalaba ahụ kpọrọ ihe karịa ifepụ mba ofesi anara ọgwụgwọ oge ọbụla ọkọ kọọrọ mmadụ.
A nọzịkwa na ya bụ mmemme wee gọzie ma hanye n'aka Chineke nnukwu ụlọ ọgbakọ ezumezu ọhụụ a rụrụ na ya bụ ụlọ ụka.
Ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme gụnyere: ndi otu 'State Executive Council' , ndi otu ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ, onye isi ụlọ ọba ego ala Naịjiria n'oge gara aga, bụ Ọkammụta Chukwula Soludo, aka chịrị steeti Anambra n'oge gara aga, bụ maazị Peter Obi, onye isi ngalaba ọdụ ụgbọ elu n'ala Naịjiria n'oge gara mbụ, bụ maazị Osita Chidịọka, tinyere ọtụtụ ndi ọzọ.